I-Amsterdam izimisele ngokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Amsterdam izimisele ngokushintsha kwesimo sezulu
Ukukhuluma ngokushintsha kwesimo sezulu kanye nezixazululo zokushweleza imiphumela yako kufana nokukhuluma ngeSivumelwano SaseParis. Leyo Ngqungquthela yokulwa nokuguquka kwesimo sezulu ebibanjwe ngoZibandlela wezi-2015 kwaba wukuhlonishwa okusha kwamazwe omhlaba ukubona ukuphuthuma okumele kwenziwe yiplanethi ukunciphisa nokuqukethe ukwanda kwezinga lokushisa lomhlaba elingaphezu kuka-1,5 ° C.
Le nhloso inesifiso esikhulu, noma kunjalo, izenzo nokuzibophezela kwamazwe akuzona izifiso ezinhle kangako. Ngokusho kwe-UN, umkhondo wokwenyuka kwamazinga okushisa esinawo Namuhla uma konke kuqhubeka kanjena kungu-3,4 ° C. Futhi lokho kubheka ukuthi wonke amazwe azisebenzisa ngokugcwele izinyathelo okuvunyelwene ngazo eParis.
1 Izenzo zokunciphisa amazinga okushisa
2 I-Amsterdam yenza umsebenzi wasekhaya
Izenzo zokunciphisa amazinga okushisa
Ngalesi sizathu, i-Conference of the Parties on Climate Change (COP22), eyenzeka eMarrakech ngoNovemba 2016, yafuna ukuqinisa lolu shintsho olulindelekile ngezenzo ezisebenzayo. Uma kungenjalo, isimo esingenzeka kakhulu sesivele sichazwe yiBhange Lomhlaba njengamagagasi okushisa angakaze abonwe, ukwanda kweziphepho ezishisayo, isomiso nendlala, namazinga olwandle ngokunyamalala kwemvelo, njll.
Kuyacaca ukuthi izinhloso nezinyathelo kumele ziguquke noma ziqine ngoba, okwamanje, azanele. Ebhekene nokufudumala kwembulunga yonke kanye nayo yonke imiphumela emibi emvelweni nasempilweni njengoba sazi, amadolobha adlala indima ehamba phambili. Izinga lamanje lokufuduka kwabantu emadolobheni alinakubekeka ngokuhamba kwesikhathi. Yingakho kudingeka ushintsho ukuze sikwazi ukubhekana nezinselelo zesikhathi sethu, sibhekane nezinkinga ezinjengokungalingani, ukuguquguquka kwesimo sezulu, nalokhu kukhula okungaphephile futhi okungabambeki emadolobheni.
Yimisebenzi yethu yansuku zonke neyansuku zonke njengokuhamba, ukuthuthwa kwemikhiqizo yabathengi nokudla, ukufudumeza, ukuxhashazwa noma ukuthuthwa kwamafutha ezimbiwa, njll. Konke lokhu kunikela ekukhishweni kwe-CO2 okusheshisa ukuguquka kwesimo sezulu. Ngokuya ngemininingwane ye-UN, ukungcoliswa kwamadolobha emadolobheni kunomthelela ekufeni kwabantu abangaba yizigidi ezingama-3,4 ngaphambi kwesikhathi emhlabeni wonke. Lokhu kungenxa yokuthi ukungcoliswa kwemvelo kwandisa amathuba okuphathwa yizifo zokuphefumula nezenhliziyo.
I-Amsterdam yenza umsebenzi wasekhaya
Kungenxa yabo bonke laba asebebalwe ngenhla ukuthi i-Amsterdam isiqalile ukusebenzisa izindlela ezihlose ukusimama okukhulu emadolobheni. Esinye sezifiso zayo ezinkulu ezindabeni zokungcola kanye nokuguquka kwesimo sezulu ukuthi kuhlose, ngo-2050, ukuba ube idolobha elingenakho ngokuphelele ukukhishwa kwe-CO2.
Phakathi kwezinyathelo ezenziwayo ukufeza lokhu kuzinza yilezi:
Uhlelo lwe- "Clean Air 2025" luhlose ukwenza ukuhamba okusimeme okususa ukukhishwa kwe-CO2 okuhambisana nokuthuthwa, okusesidlangalaleni futhi ikakhulukazi okuyimfihlo. Kubuye kucatshangelwe ukuthi esikhundleni sokuqhubeka nokushintshwa kwamabhasi aphethwe udizili ngamamodeli angakhiphi ugesi kanye nokwanda kwenani lezimoto ezisebenza ngogesi. Ukuxhaswa kokufakwa ngasese kwezimoto zikagesi kuzophinde kukhuthazwe ngezinhlelo zokuxhasa abantu kanye nemikhawulo yezimoto zikaphethiloli nedizili. Izimoto ezingcolisa kakhulu zizobona ukufinyelela kwazo kuvinjelwe ezindaweni ezahlukahlukene ngokuqhubekayo njengoba kwenza iMadrid Uhlelo lukaManuela Carmena.
Kuzothuthukiswa ugesi ohlanzekile nozinzile ngokusuka ekusetshenzisweni kwamalahle negesi yemvelo kuye ekusetshenzisweni okuvuselelekayo. Ngakho-ke, ngo-2050 Kuhloswe ukuthi kuqede ukusetshenziswa kwegesi yemvelo kulo lonke idolobha ukuyenza ibe yindawo engenakho ukukhishwa kwe-CO2. Eminyakeni emine ezayo, kulindeleke ukuthi eminye imizi eyi-100.000 ingafakwa kunethiwekhi entsha efuthwe ngamandla ahlanzekile, ezotholakala ngokushisa udoti, kusetshenziswa amandla asele avela embonini, amandla afuthayo, igesi eluhlaza (leyo khipha izinto eziphilayo ezifana nomquba noma imfucumfucu yezitshalo), noma ukusetshenziswa kwamapaneli elanga.
Izinhlelo zokuqwashisa ngezemvelo nezemfundo. Lokhu kubaluleke kakhulu ukuze kuthuthukiswe izinga lomoya wasemadolobheni. Iphrojekthi ebizwa ngokuthi IsihlahlaWifi lapho kuzanywa khona ukugqugquzela omakhelwane ukuthi bagcine umoya ohlanzekile wemigwaqo ngokushintshana nge-inthanethi yamahhala. I-TreeWifi ifaka izindlu zokugcina izinyoni ezihlahleni zedolobha ngenzwa yokukala ikhwalithi yomoya nomzila we-WiFi onoxhumano lwe-Inthanethi. Ngakho-ke, inqobo nje uma amazinga okungcola kanye nekhwalithi yomoya ejwayelekile ihlala ngaphakathi kwemikhawulo enconyiwe, uphahla lwendlu yezinyoni luzokhanya luhlaza futhi omakhelwane bazoba ne-WiFi yamahhala. Ngaphandle kwalokho, uphahla lwendlu luzokhanyisa obomvu futhi i-router izonqamula ukuxhumana kwe-Intanethi.
Njengoba ukwazi ukubona, i-Amsterdam yenza umsebenzi wasekhaya kahle futhi wonke amadolobha omhlaba nawo kufanele awenze.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » I-Amsterdam izimisele ngokushintsha kwesimo sezulu